Goobaha Khadka Tooska ah ee Nederlandka - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka
(346 votes, celcelis ahaan, 4.99 out of 5)
Loading ...Ganacsiga khamaarka ee Nederland waxaa si adag u xukuma dowladda. Nidaamka sharciyeynta khamaarka dalka wuxuu qaatay waqti badan marka lala barbardhigo dalalka kale ee Yurub, iyo sidoo kale dabeecadaha la xiriira khamaarka Nederland oo aad u adag. Waqtigan xaadirka ah, kali ahaanshaha maamulka khamaarka dhulka ku saleysan ee ku yaal hawlwadeenka Holland Casino. Shirkaddu waxay la shaqeysaa bartamihii 1970-yadii, markii ay ka furatay khamaarkii ugu horreeyay ee laga leeyahay Dutch Zandvoort. Hadda waxaa jira 14 casinos oo waddanka oo dhan ah, in kasta oo xaqiiqda ah in hawlwadeenka Holland Casino uu dhowaan la kulmay dhibaatooyin dhaqaale. Ogeysiis ku saabsan booqdayaasha kaydka khamaarka ee khadka tooska ah ee ah in kali ahaanshaha dalka si adag loo ilaaliyo. Dawladda Nederland waxay si ballaaran u soo bandhigtay sheeko leh ganaax dhan 100 kun oo euro,
Khamaarka khadka tooska ah ee Nederland
Dowladda Nederland muddo labo sano ah inay ka shaqeyso sharciga qabyada ah ee sharciyeynta khamaarka internetka. Ugu dambeyntiina, 7-dii Luulyo, 2016-ka ayaa la ansixiyay sharci ku saabsan khamaarka khadka tooska ah ee Nederland, kaasoo dhaqan galay 1-dii Janaayo, 2017. Dad badan oo ka shaqeeya qamaarka caalamiga ah ayaa horay u muujiyay xiisaha ay u qabaan suuqa ciyaarta. Si kastaba ha noqotee, ka hor inta aysan awoodin inay bixiyaan adeegyadooda, waxay u baahan yihiin inay helaan shati rasmi ah. Jaangooyaha khamaarka (Hay'adda Khamaarka ee Dutch - Kansspelautoriteit, KSA) ayaa xannibaysa dhammaan bogagga khamaarka khadka tooska ah ee Nederland, kuwaas oo shaqeynaya bilaa shati. Waxaan ogsoonahay in khamaarista dhulka iyo khadka tooska ah ee wadanka ka dhaca laga canshuuro xaddiga 29%.
Liistada Liiska 10 ee Goobaha Kubadda Cagta ee Holland
1-da Janaayo, 2017 wuxuu dhaqan gelayaa sharci cusub oo u oggolaanaya khamaarka khadka tooska ah ee Nederland. Muwaadiniinta Nederlandka ah ee si buuxda ugu xaddidan berrinka khamaarka, hadda ma aha oo keliya bilaash inay sigaar cabbaan, laakiin sidoo kale khadka tooska ah sharad kuma geli karaan.
Nederland, ma badalin dowladda oo keliya. Waxaa jiray wax ka badal lagu sameeyay sharciga wadanka, qaasatan, wax ka badal ayaa lagu sameeyay sharciyada khamaarka ee Holland. Golaha Wasiiradu waxay go’aansadeen inay sharciyeeyaan khamaarka internetka ee horey looga mamnuucay Nederland, oo ujeedkiisu yahay hagaajinta ganacsiga qaranka. Sababta loo mamnuucay waxay ahayd in laga fogaado in lacag dibada loo qaado. Si kastaba ha noqotee, markii ay bilaabatay dhibaatada dejinta ciyaaraha internetka, masuuliyiintu waxay heleen waddo looga baxo xaaladda adag ee dhaqaale.
Holland - waa dal wax kasta laga oggol yahay, oo waddammada kale ka mamnuuca sharciga
Nederland aduunka oo dhan ayaa looga yaqaan wadan si rasmi ah loogu oggol yahay daroogada jilicsan. Si aad u noqoto mid sax ah, Amsterdam, dalxiisayaashu uma yimaadaan oo kaliya inay ku raaxaystaan ​​farmaajo, socod ku maraan waddooyinka, laakiin sidoo kale waa sharci inay cabaan cawska oo ay cunaan boqoshaada sixirka. Xaafadda laydhka cas ee waddada ayaa ah soo jiidashada ugu weyn ee caasimadda, taas oo aan la yaab lahayn, maxaa yeelay kaliya Nederland, dhillaysiga ayaa laga sharciyeeyaa heer gobol. Intaasina kuma eka. Hadda, waxay u muuqataa, inay tahay gobol ay wax walba ka suurtoobaan. Si kastaba ha noqotee, liiska wadamada loo oggol yahay khamaarka, si rasmi ah loogu biirey iyo Holland. Fursada lagu ciyaaro khadka tooska ah ee internetka iyo turubka khadka tooska ah ayaa ka muuqday Dutch.
Khamaarka khadka tooska ah ee Nederland - sidii ay ahayd iyo sidii ay noqotay
Dowladda Nederland waxay ka shaqeyneysaa sharciyeynta sharciyeynta ganacsiga ciyaaraha internetka labadii sano ee la soo dhaafay. Waqtigaas, waxay si buuxda ula wareegtay dhammaan warshadaha ciyaaraha dalka. Waxaa loo oggolaaday kaliya bakhtiyaa-nasiibka khadka tooska ah, iyo sidoo kale bannaanka mamnuuca oo waxay ku sharmayeen isboortiga Nederland. Sidaa darteed, khamaarka dadweynaha Nederland wuxuu si qarsoodi ah ugu lahaa bogagga ajaanibta khadka tooska ah laga helo.
Si kastaba ha noqotee, dhawaanahan waxaa la ogaaday in dowladda Nederland ay dooneyso inay sharciyeyso khamaarka shabakadda. Tan iyo bilowgii bishan, oo ah 7-da Luulyo, Baarlamaanku wuxuu meel mariyey sharci lagu sharciyeeyo khamaarka internetka ee Nederland. Si kastaba ha noqotee, khamaarayaasha iyo sicirka khadka tooska ah waa inay noqdaan xoogaa dulqaad yar - sharciga ayaa dhaqan galaya ilaa sanadka soo socda.
Xayiraadaha iyo mamnuucidda qaar
Caqli xumo ayey ku ahaan laheyd dhanka dowlada inay dalka siiso xoriyad dhameystiran walina ay leedahay xoogaa xadido ah. Waa in la ogaadaa in sharcigu mamnuucayo adeegsiga xafiisyada bakhtiyaa-nasiibka, iyo sidoo kale xarumaha khamaarka ee dhulka ku saleysan ee loogu talagalay dhiirrigelinta dalab kasta oo khadka tooska ah ah. Intaas waxaa sii dheer, xannibay wixii ah goobaha khamaarka ee caalamiga ah. Sidoo kale mamnuuc xayeysiinta sharadka internetka.
Safarkayagii Yurub ee xawliga ku socday, maantana tubteennu waxay ku taal dhul xorriyad, tulips dhalaalaya iyo xashiish. Haa, waad aqrisay xaqaas, waxaan booqan doonnaa Nederland oo waxaan kaheleynaa midka ugu xiisaha badan uguna faa'iidada badan.
Netherlands mise Holland? Iyo taariikh yar;
Sharci ahaan hoos timaada kormeerka Sanduuqa Qaranka;
In Amsterdam, casino "Holland";
Waxay ku yaalaan magaalooyinka waaweyn.
Shan goob oo ku yaal caasimadda Amsterdam ee cinwaanada;
Laakiin ha u maleynin in casino loo oggol yahay waddan gaar ah sababtoo ah ganacsiga gobolka. Xaqiiqda ah in aysan jirin tallaabooyin ciqaab ah oo aan tirtiri karin ganacsiga khamaarka sharci darrada ah. Tani miyaanay ku dhici karin Naasigii Jarmalka, halkaas oo aan dib u xusuusano in qabanqaabiyayaashii casino qarsoodi ah bilaa maxkamad loo diray xerooyinka foojignaanta Iyo wax ku filan, ka dib markii kuwa kale ee hore ee Yurub ay fahmeen awoodda Holland ee xorta ah.
Gurigii ugu horreeyay ee khamaarka halkaas wuxuu ka muuqday oo keliya 1976 magaalada Zandvoort, oo ku taal 20 mayl Amsterdam. Wax yar ka dib in la furo laba casinos oo kale, mashiinnada ciyaarta ayaa loo oggolaaday, laakiin in kasta oo ay taasi suurtagal ahayn in laga takhaluso hay'adaha dambiyada. Waxay umuuqataa inuu yahay dal yar, lagana gaarayo meelaha loo dalxiis tago ee kudhow khamaarka, laakiin magaalooyinka waawayn wali waxay kujiraan godad dhulka hoostiisa ah.
Kadib duqa magaalada Rotterdam wuxuu ka codsaday dowlada in loo ogolaado qamaarka magaaladiisa. Duqa magaalada ayaa ku andacooday in goobaha loo yaqaan 'casino' aysan xallin dhibaatada, khamaarka ugu dhow ee saacad ka socda Rotterdam - raaxo la'aan, iyo abaabulka casino ayaa loo baahan yahay. Dawladu waxay bilawday inay fikirto, waxay su aalo u dirtay dawladaha hoose dhamaan 35ka maayirna waxay kujawaabeen furitaanka casinos ee magaalooyinka loo baahanyahay.
Hadda Holland waxay leedahay 14 xarumood oo khamaar lagu rakibay 69,000 oo mashiinno naadi ah, kuwaas oo ka mid ah 45 800 oo abaalmarin lacageed ah. Si kastaba ha noqotee, mashiinnada ayaa nidaaminaya ma aha oo kaliya sharci adag, laakiin sidoo kale cabirka khamaarista iyo guuleysiga. Sidaa darteed, heerka ugu sarreeya - 20 senti, abaalmarinta ugu badan ee ciyaar - 40 euro, celceliska luminta saacaddii - 40 euro, iyo cabirka ugu badan ee Ghanna - 2500.
Kuwo badan ayaa wareersan, sidee dhab ahaan sax u tahay in la dhaho - Holland ama Nederland, iyo haddii ay u dhexeeyaan magacyadan waa kala duwanaansho aasaasi ah? Jawaabtu - aad bay u badan yihiin!
Xaqiiqda ah in Nederland loogu yeero oo kaliya 2 ka mid ah 12-ka gobol ee Nederland. Degsiimooyinka ugu horreeya ee dhulka maanta casriga ah ee Nederland waxay bilaabeen inay muuqdaan xitaa 250,000 sano kahor.
Kuwani waxay ahaayeen qabiilooyin kala duwan oo Jarmal ah, oo markaa ay qabsadeen Roomaankii oo qarniyadii dhexe ay ka mid ahaayeen Boqortooyadii Roomaanka ee Barakaysnayd. Waddanku wuxuu muddo dheer halgan ugu jiray madax-bannaanida halkan horaantii qarnigii 19-aad, wuxuu noqday qoyska boqortooyada ee Orange
1830kii Beljim waxay go'day oo Luxembourg 1890. Madaxa dawladda waxaa jooga boqorka, tan iyo 2013 waa Willem-Alexander, oo si toos ah ugu abtirsada boqortooyadii Orange. Isaga hortiisa, muddadii 123 sano, carshiga waxaa ku fadhiyey dumar keliya. Boqortooyadu waa madaxa dawladda, wuxuu gacan ka gaystay tafatirka Ra'iisul-wasaaraha iyo xukuumadda.
Nederland waxaa aduunka looga yaqaan sharciyeynta marijuana iyo u aqoonsashada dhilleysiga xirfad ahaan. Laakiin halkan waa aragtida ku saabsan khamaarka dalkan waa mid adag. Halkan waxaa ku yaal waxa loogu yeero Sanduuqa Qaranka, oo mas'uul ka ah xakamaynta khamaarka. Guud ahaan waxay ku leedahay 14 xafiis magaalooyinka waaweyn ee dalka. Dhamaan macaashka ayaa si toos ah ugu dhaca khasnadaha dalka.
Amsterdam - caasimada Nederland - waa casaan raaxo leh «Holland». Kani waa khamaarka kaliya ee magaalada ku yaal sidaa darteedna wuxuu ciyaaraa doorka monopolist. Dhismaha «Holland» oo ka kooban saddex dabaq oo leh iftiin aad u wanaagsan. Dabaqa hoose waxaad ku ciyaari kartaa dhibco hoose, tan labaadna waa nuucyo kala geddisan iyo taageerayaasha dabaqa saddexaad oo loogu ciyaaro saamiyada sare waxay ka ciyaari karaan turub sar sare. Dabaq kasta waxaad ku raaxeysan kartaa labada kulan ee kaararka iyo roulette, iyo dhammaan noocyada boosaska.
Turubku wuxuu ku raaxeeyaa sharaf gaar ah - halkan waxaa si joogto ah loogu qabtaa tartamo, heer maxalli ah iyo heer caalami ah. Isaga oo jooga meesha laga soo galo casino waxaad xaqiiqdii u baahan tahay inaad haysato baasaboor, maxaa yeelay waxaa la ciyaari karaa oo keliya markaad gaarto 18 sano jir. Foomka dharka - suudh iyo dheelitir loogu talagalay dumarka doorbid is biirsaday ama goonnada fiidkii. Qiimaha gelitaanku waa qiyaastii 4 €.
Cayaartooyda Amsterdam, Breda, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Scheveningen, Garoonka Schiphol, Utrecht, Valkenburg, Venlo, Zandvoort.
Matxafka Van Gogh. Cinwaanka: Paulus Potterstraat 7. Halkan waxaad ka heli doontaa sheeko taariikh nololeedkii fannaanka, matxafku wuxuu dib u soo celinayaa hannaankii shaybaarka, meeshii uu ku noolaa iyo ka soo shaqeeyey - intaas oo dhan waxay kaa caawinayaan inaad dhex gasho jawiga uu fannaanku ku imanayay.
Matxaf Erotic ah. Cinwaanka: Oudezijds Achterburgwal 54. Ku socoshada wadada caanka ah ee Degmada Red Light, ha ilaawin inaad booqato matxafka erotica. Halkan waxaad ku baran doontaa taariikhda wadadan oo waxaad ku tuseysaa waxyaabo badan oo xiiso leh oo loo yaqaan 'veshchichek' oo ka yimid waqtiyo iyo dhaqamo kala duwan. Bandhigga matxafku wuxuu ku fadhiyaa 3 dabaq albaabkuna waa da'da 18.
Matxafka Rembrandt. Cinwaanka: Jodenbreestraat 4. Madxafka matxafku wuxuu ku yaal dhismihii uu ku noolaa sayidkiisa.Pomimo uruurinta caanka ah ee sawir gacmeedka farshaxanka laftiisa, halkan waxaa lagu soo bandhigay shaqadii macalinkiisa Pieter Lastman iyo ardayda. Mid ka mid ah qolalka guriga - matxaf loogu talagalay farshaxanka xardha.
Xadiiqadda Amsterdam. Cinwaanka: Dhirta Kerklaan 38-40. Dadka jecel xayawaanku waxay arki karaan in ka badan 6,000 nooc oo laga soo ururiyey adduunka oo dhan. Waa xayawaanka ugu da'da weyn Nederland - waa sanadkii la aasaasay 1838.
5. Suuqa Flea Market Waterlooplein. Cinwaanka Waterlooplein 2. Waa kugu filan tahay inaad ku dul socoto Amsterdam oo martigelinaysa, ha iloobin waxyaabaha xusuusta leh. Qiimuhu waa macquul waana xulashadu way kaladuwan tahay.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Netherlands iyo Golandtsev
Magaca koowaad ee Nederland bedelkii Nederland wuxuu yimid booqashadii Ruushka ee Peter berrinka.Wuxuu aad u xiiseynayey qeybtaas dalka, oo bad laheyn (sida gobollada Waqooyiga iyo Koonfurta Holland) iyo cinwaanka kuwan Gobollada, isaga iyo "wada baabtiisay" waddanka oo dhan;
Holland - qaranka ugu dheer adduunka, celceliska dhererka 184 cm ragga, dumarka - 170;
Tirada baaskiilada waddanka ayaa ka badan tirada dadka degan, baaskiiladaha inta badan la xado, sidaas darteed xiro baaskiilka mararka qaar kharash badan qaali ka ah baaskiilka;
Nederland, looma aqbalo casho, inta badan dadka maxaliga ah waxay cunaan rooti ama sandwich hotes;
Heerka-samaynta, heerkulbeegga meerkuriga, mikroskoobo iyo telescope ayaa lagu abuuray wadankan;
Nidaamka iskuulku wuxuu si fiican u qiyaasayaa -10, iyo kan ugu xun;
Cunnooyinka ugu jecel - isugeynta, halkaan oo leh saladhyo la sameeyay, ismaris, buskud ama si gooni gooni ah wax u cun, iyo majones. Waxaa si toos ah looga iibsan karaa kiosk-ka wadada, sida hamburgerka caadiga ah ama eeyga kulul. Waxay sidoo kale aad u jeceshahay kartofel- shiilan leh majones;
Cimilada Nederland ma fiicna - badanaa roobka iyo dabeyl dabayl wadata. Dhanka kale, cimiladu waxay noqoneysaa sababta ugu badan ee keenta hijrada Nederland;
Midabka liinta Holland Sababtuna waxay tahay tarjumaadda magaca qoyska reer boqor ee reer Holand waxay u egtahay "Guriga Orange".
Holland on map of Europe
0.1 Khamaarka khadka tooska ah ee Nederland
0.2 Liistada Liiska 10 ee Goobaha Kubadda Cagta ee Holland
2.1 Holland - waa dal wax kasta laga oggol yahay, oo waddammada kale ka mamnuuca sharciga
2.2 Khamaarka khadka tooska ah ee Nederland - sidii ay ahayd iyo sidii ay noqotay
2.3 Xayiraadaha iyo mamnuucidda qaar
3 Qamaarka Nederland
3.0.1 qayb ka mid ah taariikhda
3.1 Qamaarka Nederland
3.1.1 Soojiidashada Amsterdam
3.1.2 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Netherlands iyo Golandtsev
3.1.3 Holland on map of Europe
manhattan boorsamiin deebaaji deebii